ट्राफिक सचेतना पाठ्यपुस्तकमै व्यवस्था हुनुपर्छ - Pradesh Today
Homeविचारट्राफिक सचेतना पाठ्यपुस्तकमै व्यवस्था हुनुपर्छ
ट्राफिक सचेतना पाठ्यपुस्तकमै व्यवस्था हुनुपर्छ
दाङसहित देशभर सवारी दुर्घटनाको स्थिति भयावह बन्दै गएको छ । नेपालमा दैनिक ७ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
बढ्दो सवारी दुर्घटनाका कारण गन्तब्यमा हिडेको यात्रु फर्कन्छ कि फर्कदैन् चिन्ताको विषय बनेको छ । सडक असुरक्षाका कारण विद्यालय हिडेको बालबालिकादेखि गन्तब्यमा हिडेको यात्रु दुर्घटनाको जोखिममा परेको छ । जिउ नै सिरिङ्ग हुने गरी हुने सवारी दुर्घटनाले नागरिक आहात भएका छन् ।
सवारी दुर्घटना रोक्न कसैले चाहेर रोक्न त सकिदैन् तर पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न पक्कै सकिन्छ । भौगोलिक विकटताका कारण दुर्घटनाबाट झन धेरै क्षति हुने गरेको छ । सडकको अवस्था सुधार हुन नसक्दा पनि दुर्घटना बढ्दो क्रममा छन् । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विभिन प्रयास भएपनि ति प्रयास सार्थक बन्न नसकिरहेको स्थिति छ ।
दुर्घटनामा नागरिकले अनाहकमा कहिलेसम्म ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति हो ? आम चासोको विषय बनेको छ । बढ्दो सडक असुरक्षालाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू चिन्तित बन्नुपर्ने हो । ट्राफिक नियम पालनमा कडाईसँगै सडकको अवस्था सुधार गर्नका लागि गम्भीर बन्नुपर्छ नै ।
अहिले भएका प्रयासले दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छन् भन्न सकिदैन् । किनभने पछिल्लो घटनाक्रमले पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका प्रयास किन सार्थक बन्न सकिरहेका छैनन् ? भन्ने कुराको खोजी गर्न आवश्यक छ । आज हामीले दुर्घटनाको कारण र निराकरणका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग प्रदेश टुडेको राउण्ड टेबलमा कुराकानीको सारसंक्षेपमा प्रस्तुत गरेका छौं ।
राप्ती बबई क्याम्पस
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास सार्थक बन्न सकिरहेको छैन् । विद्यालय जाँदै गरेका बालबालिका असुरक्षित छन् । सवारी चालकको लापरबाही र बिगबिगी बढेको छ ।
बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि हुने चेतनामूलक कार्यक्रम कोठामै सीमित हुने गरेका छन् । घरबाट निस्किसकेपछि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ सकिन्न आफैले आफैलाई प्रश्न गर्ने हुन्छ । सडक यातायात नेपालीलाई विकल्पहीन विकल्प हो ।
जलमार्गको सम्भावना नभएको, रेल मार्गको विस्तार भै नसकेको र हवाई मार्ग अधिकांश नेपालीको पहुँच बाहिर रहेकाले सडक यातायात मात्रै भरपर्दो यात्राको माध्यम हो । तर, सडक यातायात असुरक्षित बन्दै गईरहेको छ, सडक दुर्घटना र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढेको छ ।
दुर्घटनामा निर्दोष नेपालीहरूले अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । अपाङ्गता भएर बाँच्न बाध्य छन्, धनको क्षति त्यत्तिकै छ । दुर्घटनाले व्यक्ति, परिवार, समाज तथा देशलाई ठूलो क्षति भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकपक्षले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहने भन्दा पनि सडक दुर्घटनाका कारणहरू खोजिन आवश्यक छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्छ ? चालकदेखि विद्यार्थीमा सचेतनाका कार्यक्रम लैजान जरूरी छ । नीतिगत रूपमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुन जरूरी छ ।
दुर्घटनाका कारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अर्कोकुरा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । दोषीलाई कडा कारवाही नहुँदासम्म पनि सवारी दुर्घटनाको लापरबाही कमी हुनेवाला छैन् ।
केही दिन अघिमात्रै निर्दोष बालिकाले ज्यान गुमाउनुप¥यो, अर्को बालिका घाइते भइन् । सवारी दुर्घटनाका दोषीलाई कानुनी कारवाही नहुँदा पनि दुर्घटना अझै बढ्ने देखिन्छ । कानुनी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
विद्यालय क्षेत्रमा सीमित गतिमा सवारी चलाउने भनिएपनि कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ । यसकै उदाहरण बिहीबारको घटना हो । यस्तै स्कुले बालिकाले कहिले अकालमा मृत्युवरण सवारी दुर्घटनाकै कारण गर्नुपर्ने हो, निकै बिडम्बना हो ।
जिम्मेवार निकायलाई दुर्घटना भवितव्य घटना त हो भनेर समान्यरूपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । जसका कारण पनि दुर्घटना बढ्दै गएका छन्् । सवारी दुर्घटना सडकको संरचनासँगै चालकको लापरबाहीकै कारण बढी हुने गरेका छन् ।
बजारमा सवारीको तिब्र गति र ग्रामीण सडकको अवस्था सुधार हुन नसक्नुले दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको पाइन्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न भएका प्रयासलाई फराकिलो दायरामा लैजानुपर्छ ।
नियमविपरीत सवारी चलाउने चालकलाई कडा कारवाही गर्ने, सार्वजनिक यातायातको सुविधा पर्याप्त गराउने, सडकको अवस्था सुधार गर्ने र पुराना सवारी साधनलाई निषेध गर्ने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
विद्यालयस्तरमा पनि ट्राफिक नियमबारे पाठ्यपुस्तकमै व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि कतिपय सर्वसाधारण नागरिक जेब्रा क्रसिङ लगायतका ट्राफिक नियमबारे सचेतना नुहुँदा पनि सवारी दुर्घटना बढिरहेको पाइन्छ ।